ट्याक्सी भाडा बढ्यो, अब कति पर्छ ? - A complete Nepali news portal based on news & views
ट्याक्सी भाडा बढ्यो, अब कति पर्छ ?
२४ पुस २०७८, शनिबार २१:०४ January 8, 2022 Buddha Sharan
पुस २४,काठमाडौं ।
वाग्मती प्रदेश क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सीको भाडा बढेको छ ।
भाडा निर्धारण÷समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुुक्तानी नियमावली २०७८’ बमोजिम माघ १ गतेदेखि लागूू हुुनेगरी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले छ हजार ८७ ट्याक्सीको मिटर भाडा समायोजन तथा निर्धारण गरिएको हो।
नयाँ भाडादर अनुसार ट्याक्सी चढेपछि पहिलो १ किलोमिटरसम्मको यात्राको लागि ६० रुपैयाँ लाग्नेछ भने क्रमस त्यसपछि प्रत्येक २ सय मिटरकाे ९ रुपैयाँ ८० पैसाका दरले थप हुँदै जाने भएको छ । ट्याक्सी को भाडा बढेको यो सात बर्ष पछिको हो । इन्धन तथा स्पेर् पार्ट्समा भएको मुल्य बृद्दी लाइ मध्य नजर गर्दै नयाँ भाडा डर कायेम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले प्रत्येक ट्याक्सी मिटरमै हिँड्नुपर्ने, यात्रुलाई ट्याक्सी चालकको भिजिटिङ कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने, छुटेका सामान सुरक्षित राखी प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने र ट्याक्सीमा नियमित सरसफाइ र लैङ्गिक विभेदमुक्त अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने समेत मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।
यसअघि १ किलोमिटरसम्म ५० रुपैयाँ र त्यसपछि प्रति २ सय मिटरको ८ रुपैयाँ ८० पैसाको दरले भाडादर कायम गरिएको थियो । अहिले यो झन्डै २० प्रतिशतले बढाइएको हो । अहिलेको वृद्धि सुरुवाती भाडादरमा २० प्रतिशत र त्यसपछिको भाडादरमा ११.३६ प्रतिशत बढी हो ।